Abavelisi bemibala ephathekayo - iChina ephathekayo yombala weemveliso kunye nabathengisi
Q-1000 Turbidimeter ephathekayo
I-algorithm yokuchithwa kwe-90 ° engenzi kuphela ukwenza umlinganiso womoya ophantsi uzinze ngakumbi, kodwa ikwaqonda uluhlu olubanzi lovavanyo lwesixhobo (amabala asezantsi, aphakathi kunye aphezulu). ngovakalelo oluphezulu.
Q-CL501B i-Chlorine yasimahla kunye neChlorine iyonke kunye neChlorine edibeneyo yeColorimeter
I-Q-CL501B i-colorimeter ephathekayo sisixhobo sokufumanisa esinokubona i-chlorine yasimahla, iyonke iklorini, kunye neklorine edibeneyo. Ikwasisixhobo sokwenyani esiphathekayo esifanelekileyo somsebenzi wasentsimini njengoko sinobunzima bokukhanya kunye neebhetri zangaphandle. Ukungagqibeki okumiselweyo kunye neendlela ezisekwe kwi-EPA ziqinisekisa ukuchaneka kwesiphumo sovavanyo, yiyo loo nto inokusetyenziswa kuvavanyo lwaselebhu. Isetyenziswa kakhulu kwicandelo lokujonga ukubulala iintsholongwane emanzini.
I-Q-CL501P Chlorine kunye ne-pH ephathekayo yombala wombala
I-Q-CL501P ilungiselelwe ngokukodwa ukuvavanywa kweklorini yasimahla kumanzi okusela echibini lamanzi kunye namanzi amoshakeleyo kunye novavanyo lwe-pH kubunzulu obuphantsi kunye nokusetyenziswa kwamanzi okusela kunye nomthombo wamanzi. umbala. Ukupheliswa kwempazamo yomntu, ke isisombululo semilinganiselo siphuculwe kakhulu.
Umbala we-Q-SD500 weChroma oPhathekayo
I-Q-SD500 sisixhobo sovavanyo lobungcali ngombala wamanzi, kunye negophe elakhelweyo ngaphakathi, iyayiphepha impazamo ebonakalayo ngokufanelekileyo. Yicompact, ilula ukusebenza, akukho sidingo sokongeza izinto zokulinganisa, ukulinganisa iisampulu zamanzi ngokuthe ngqo, ngokulula nangokukhawuleza.
I-Q-AO I-Oxygen esebenzayo ye-colorimeter
I-Q-AO Ioksijini esebenzayo ephathekayo yeColorimeter inokuvavanya intsalela yokusebenza kweoksijini emanzini eneentsholongwane yi-potassium monopersulfate.
I-Q-3N iAmmonia yeNitrogen kunye neNitrate yeNitrogen kunye neNitrite yeNitrogen Umbala obalulayo
Luhlobo lokuqala lwesixhobo esiphathwayo esinokuvavanya i-ammonia nitrogen, nitrate nitrogen kunye ne-nitrite nitrogen ngaxeshanye kwimarike yasekhaya. Iziphumo zovavanyo ziya kukunceda uhlalutye inqanaba longcoliseko kunye namandla okuzicoca kwamanzi.
I-Q-03-02 / Q-03-01 I-colorimeter ephathekayo ye-Ozone
I-colorimeter ephathekayo ye-ozone isekwe ngokusekwa ekukhethweni kwemitha ye-elektronignetic eveliswa kukusabela kwe-ozone kunye ne-arhente yokuphuhlisa umbala kwisampulu yamanzi, kwaye umxholo we-ozone kwisampulu evavanyiweyo unokuboniswa ngqo kwiscreen seLCD. uyilo lokuvavanya i-ozone eseleyo emanzini okusela kunye namanzi amdaka, anokusetyenziswa kakhulu emsebenzini wasentsimini nakwilabhoratri nakwezinye iindawo.
I-Q-TSS Izinto eziQinisekisiweyo eziQinisekisiweyo zombala wombala
I-Q-TSS i-colorimeter eqinileyo enqunyanyisiweyo ephathekayo sisixhobo esiphathwayo sokulinganisa esinikezelwe ekufumaneni izinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo kumanzi amdaka. Ukwamkela uyilo lwe-in-one, izixhobo zihlala kwindawo encinci.
I-Q-CL-10 Chloride / Chloridion umbala wemitha ophathwayo
I-Q-CL-10 Colimeter ephathekayo inokusetyenziselwa ukuvavanya i-chloride ion okanye i-chloride kwiindawo ezininzi, ezinje ngamanzi okusela, amanzi amdaka, amanzi ajikeleza kwimizi-mveliso njalo njalo.
Q-pH31 Umbala obala ophathwayo
I-Q-pH31 i-colorimeter ephathekayo sisixhobo sovavanyo lobuchule sokufumana ixabiso le-pH. Yamkela umbala wesisombululo se-buffer esemgangathweni. Ayifuni kulondolozo olukhethekileyo kunye nokulinganisa rhoqo. Kulula ukusebenza kwaye kulula.
I-Q-Cr6 i-Hexavalent Chromium ephathekayo yombala wombala
I-Q-Cr6 I-colorimeter ephathekayo isisiseko kwi-USEPA kwaye kufanelekile ukuvavanya uxinzelelo lwe-chromium enesitayile emsebenzini wasentsimini ngokukhawuleza.
Q-AL01 Aluminium ion umbala wemitha ophathwayo
Umbala we-Q-AL01 ophathwayo ungasetyenziselwa ukuvavanya ion yeAluminiyam kwiindawo ezininzi, ezinje ngamanzi okusela, amanzi amdaka, amanzi ajikeleza kwimizi-mveliso njalo njalo, olungele umsebenzi wasentsimini kunye nokuvavanywa elebhu.